Durcal, ihe nlele nwere GPS maka ụmụaka na ndị okenye | Ngwa akụkọ
Miguel Hernandez | 30/03/2022 10:00 | Ngwa, General, Nyocha, smartwatch
Nzikọrịta ozi na ohere a na-enye anyị iji chọta ndị okenye na ụmụaka ugbu a dị ọnụ ala karịa ma nwee ike ịnweta ya. Nhọrọ ikpeazụ nke bịara na tebụl nyocha sitere na ụlọ ọrụ ọhụrụ a na-akpọ Ọnọdụ na anyị ga-enyocha ya iji hụ ma ọ na-enye ikike ọhụrụ na mpaghara a.
Anyị na-enyocha njirimara ya na ọrụ ya iji nwee ike ịmata ebe ụmụntakịrị gị nọ mgbe niile yana, n'ezie, kwa ndị okenye gị.
2 Atụmatụ na arụmọrụ
Elekere dị mfe ma dị irè. O nwere obere panel mana a na-ahụ ya nke ọma, n'ime ya anyị nwere ozi ndị dị ka batrị, usoro ndị e mere, ụbọchị na mkpuchi mkpanaka. Nhazi obere n'akụkụ a.
Mgbaaka ahụ dị ọkụ nke ukwuu, jikọtara ya na ahụ silicone, Abụọ chaja atụdo na oxygen ọbara na pulse sensọ na-anọgide na ya ala akụkụ. Abụọ ndị a bụ naanị sensọ nke ngwaọrụ ahụ nwere na ọkwa nke ikike, na mgbakwunye na njirimara ndị ọzọ nke teknụzụ anyị ga-ekwu maka ya n'okpuru.
N'ọkwa nhazi na nrụpụta, elekere na-achọ ịdị mfe, minimalism na iguzogide, na-enweghị ihe ọ bụla pretense. A naghị emetụ ihuenyo ahụ aka, ka ịnyagharịa site na nhọrọ anyị ga-pịa bọtịnụ etiti, na-acha uhie uhie dị ka ihe ngosi. Site na ya anyị nwere ike ịhụ ọnụọgụ obi, oxygen ọbara, ozi na n'ikpeazụ gbanyụọ elekere.
Elekere ahụ nwere igwe okwu, ọkà okwu na mkpuchi mkpanaka, dịka anyị kwuru, o nwere kaadị nanoSIM nke gị gụnyere. Iji tinye ya, anyị ga-ewepụ obere skru abụọ na ihe nkedo gụnyere. Maka akụkụ nke ya, ọ nwekwara ịdọ aka ná ntị ọdịda smart, elekere ga-achọpụta ya na akpaghị aka wee ziga njikere na ngwa Durcal.
Ugbu a ọ bụ oge ikwu maka ngwa. Ọ bụ ihe mbụ anyị ga-ebudata, kpamkpam Free maka ma gam akporo na iOS na ọ na-enye anyị ohere ịchọta elekere, jikwaa ụfọdụ paramita, mekọrịta ya na, n'ezie, nata ọkwa ndị ahụ e kwuru n'elu.
Usoro nke mmekọrịta ọ dị mfe:
Anyị na-ebudata ngwa ma jiri ekwentị anyị mepụta akaụntụ
Anyị na-agbanye elekere mgbe ịtinyechara nanoSIM
Anyị na-enyocha barcode na IMEI
Elekere na ngwa ga-emekọrịta na-akpaghị aka
Nke bụ eziokwu bụ na usoro mmekọrịta dị oke mfe na nke ahụ nwere ekele. Agbanyeghị, anyị agaghị echefu na maka nke a anyị ga-achọ iwebata kaadị nke gụnyere, na n'ezie nkwekọrịta Movistar Prosegur Alarmas atụmatụ:
Ịkwụ ụgwọ ọnwa na ọnụnọ ọnwa iri na abụọ nke € 19 / ọnwa
Ịkwụ ụgwọ kwa afọ nke € 190
Anyị ga-eburu n'uche na ọ bụrụ na anyị akagbuo ọrụ ahụ tupu afọ, anyị ga-akwụ ụgwọ ndị fọdụrụ kwa ọnwa ruo ọnwa iri na abụọ. Ee n'ezie, atụmatụ ndị a niile gụnyere elekere kpamkpam n'efu.
Na nkenke, usoro ịkwụ ụgwọ ndenye aha a ga-enye anyị ohere ịnweta ụmụ anyị, ndị okenye na ndị dabere na "achịkwa". Site na ịpị 3 sekọnd na naanị bọtịnụ o nwere, Anyị enweela ike nyochaa ka n'ime sekọnd ole na ole ndị ọkachamara Movistar Prosegur Alarmas si enweta kọntaktị iji hụ na ọkwa onye ọrụ wee tinye aka ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na mgbakwunye na:
Nata ọkwa n'ime ngwa Durcal gbasara ụdị ọdịda ọ bụla
Nyochaa akara ngosi dị mkpa nke onye ọrụ elekere
Tulee usoro a wee jikwaa ụzọ GPS mere
Ozi mbata na ọpụpụ na ebe a na-emebu
Ọnọdụ ozugbo site na GPS
Nnwere onwe nke ihe dịka ụbọchị iri na ise
Ọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihe ọzọ na-enwe ike nweta udo nke uche, na a na-eri, N'ezie, ma ọ na-enye kpọmkwem ihe ọ na-ekwe nkwa na okwu nke arụmọrụ na ike, na-enweghị ihe ọ bụla pretension karịrị ihe e nyere na katalọgụ. Ị nwere ike ịzụta ya ozugbo site na webụsaịtị ya ma ọ bụ site na ịkpọ 900 900 916 na nkwekọrịta atụmatụ nke na-eju gị afọ kacha, ị ga-enweta ya n'ime 48 awa nkwekọrịta.
Ihe na: 30 March nke 2022
izi ezi GPS
ịkwụ ụgwọ ndenye aha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Durcal, ihe nlele nwere GPS maka ụmụaka na ndị okenye